DHAGEYSO:Wafdiga Soomaaliya ku matalayo dacwadda Badda oo maanta Muqdisho ka dhoofay | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Wafdiga Soomaaliya ku matalayo dacwadda Badda oo maanta Muqdisho ka dhoofay
DHAGEYSO:Wafdiga Soomaaliya ku matalayo dacwadda Badda oo maanta Muqdisho ka dhoofay
Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxaa goor dhow ka ambabaxay Guddiga DFS u matalaya dhageysiga kiiska DacwadDa badda ee taalla Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ, iyagoona kusii jeeda dalka Nederlands.
Guddiga ka socda dowladda ayaa waxaa hoggaaminayo sii-hayaha xilka Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamad Guuleed Khadar, waxaana qeyb ah Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka iyo xubno kale, waxaana Garoonka kusii sagootiyay Mas’uuliyiin kala duwan.
Mahdi Guuleed oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in kiiska Dacwadda Badda ee u dhexeeya Somaaliya iyo Kenya dhowr jeer dib loo dhigay, ka gadaal markii ay codsatay Kenya, hayeeshee haatan loo diyaar garooway dhageysiga Dacwadda.
Waxaa uu sheegay in Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ ay Go’aan kama dambeysay ah ku gaartay in dhageysiga Dacwada Badda la bilaabayo 15-ka Bishaan ilaa iyo 19-ka isla bishaan.
Dowladda Federaalka ayuu Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka sheegay inay diyaar u tahaya ka qeyb galka dhageysiga Dacwada badda ee kala dhexeysa Kenya, islamarkaana Maanta ay u dhoofayaan Magaalada The Hague ee dalka Holland
Dowladda Kenya ayaa Maxkamadda ICJ ka dalbatay in muddo saddex jeer in dib loo dhigo dhageysiga kiiska Dacwadda badda ee kala dhxeysa Soomaaliya, hayeeshee Maxkamadda ayaa go’aan ku gaartay in 15-ka bishaan la bilaabayo dhageysiga kiiskan.
Previous articleAustralia oo hakisay xiriirkii militari ee Myanmar